यशैया 38 ERV-NE - हिजकियाह - Bible Gateway
हिजकियाह विरामी परेका
38 त्यसबेला, हिजकियाह बिमार भए अनि मृत्युको मुख सम्म पुगे। आमोसको छोरो अगमवक्ता यशैया उनलाई हेर्न गए। यशैयाले राजालाई भने, “तिमीलाई यी कुराहरू भन्नु परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो ‘तिमी चाँडै मर्नेछौ। यसैले तिमीले तिम्रो सन्तानहरूलाई तिमी मरे पछि के गर्नु पर्ने बताउनु पर्छ। तिमी निको हुने छैनौ।’”
2 हिजकियाह भित्तातिर फर्किए जुन मन्दिर सम्मुख पर्दथ्यो र प्रार्थना गर्न थाले। उनले भने3“हे परमप्रभु! याद गर्नुहोस कि मैले तपाईंलाई आफ्नो साँच्चो हृदयबाट पूर्ण रूपले सेवा गरेकोछु। मैले ती कुराहरू गरे जुन तपाईंले असल हुन भन्नुभयो।” तब हिजकियाह धुरू-धुरू रोए।
4 यशैयाले यो वचन परमप्रभुबाट प्राप्त गरे,5“हिजकियाकहाँ जाऊ अनि उसलाई भन कि, परमप्रभु तिम्रो पिता-पुर्खा दाऊदका परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ‘मैले तिम्रो प्रार्थना सुनें अनि मैले तिम्रो आँशुहरू देखें। म तिम्रो आयु पन्ध्र बर्ष बढाईदिनेछु।6म तिमी र तिम्रो यस शहरलाई अश्शूरका राजाबाट बचाउने छु। म यस शहरको रक्षा गर्नेछु।’”
7 यो परमप्रभुबाट संकत हो जसले देखाउँदछ कि उहाँले भन्नु भएका कुराहरू नै गर्नु हुनेछ। 8 “हेर, दश पाइला पछि हट्नुलाई म छाँया बनाउँदैछु जुन अहाजको पाइलाहरूमाथि[a] छ। जब घाम ती सिडीहरूमा चम्कन्थ्यो त्यो छाँयाले दिनको समय बताउँथ्यो।”
9 यो हिजकियाहबाट पठाईएको चिट्ठी हो जुन उनी आफ्नो बिमारी अवस्थाबाट निको भए पछि लेखेका हुन:
10 मैले स्वयंलाई भनें, “म बूढो भई बाँच्ने छु।
तर त्यतिबेला मेरो उमेर पातालको प्रवेशद्वारहरूबाट जाने भइसकेको हुनेछ।
अब मैले मेरो सबै समयहरू यहाँ बिताएँ।”
11 यसकारण मैले भने, “म परमप्रभु याहलाई[b]
यस संसारमा फेरि बाँचिरहेको देख्ने छैन,
म पृथ्वीमा मानिसहरू बाँचिरहेको देख्ने छैन।
12 मेरो घर, मेरो गोठालाको तम्बु, भत्काई रहेछन्
अनि मबाट टाढा सारिरहेछन्, म मानिसहरूले लुगा तानबाट,
तान्दै सिलाउनलाई काटे जस्तै शेष भइरहेछु।
तपाईँले मेरो जीवन यति चाँडै शेष पारिदिनु भयो।
13 सारा रात सिंह गर्जे जस्तै म साह्रो रोएँ,
तर मेरा आशाहरू धुलो पारिदिए सिंहले हड्डीहरू चपाए जस्तै।
तिमीले मेरो जीवन यति चाँडै शेष पारिदियौ।
14 म ढुकुर जस्तै रोएँ, म चरा जस्तै रोएँ
मेरा आँखाहरू थकित भए
तर मैले लगातार स्वर्ग तिर हेरिरहे।
हे मेरो मालिक!
म अत्यन्त खिन्न भएँ
मलाई साथ दिने वचन दिनुहोस्।”
15 के म भन्न सक्छु?
के घटना हुनेछ मेरो मालिकले मलाई भन्नुभयो।
अनि मेरो मालिकले नै त्यस्तो घट्ना गराउनु हुनेछ।
यस्तो विपत्तिहरू मेरो आत्मामा छँदै थियो
यसकारण अब मेरो जीवनभर विनम्र हुनेछु।
16 हे मेरो मालिक! मेरो आत्मा बलियो पार्नलाई,
यी दु:खका दिनहरू देखाउनुहोस।
मेरो आत्मालाई बलियो र स्वस्थ बनाउनलाई सघाउनुहोस।
मलाई असल हुनलाई सघाउनु होस्।
मलाई फेरि बाँच्नलाई साथ दिनुहोस्।
17 हेर! मेरा कष्टहरू गए।
अब मलाई शान्ति छ।
तपाईंले मलाई असाध्य प्रेम गर्नुभयो।
तपाईंले मलाई चिहानमा सड्न दिनु भएन,
तपाईंले मेरो सारा पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो।
तपाईंले मेरो सबै पापहरू टाढा फालिदिनु भयो।
18 मृत मानिसहरूले तपाईंको स्तुति-गान गाउन सक्तैन्।
पातालमा भएका मानिसहरूले तपाईंको गुण गाउँदैनन्।
मृत मानिसहरूले उनीहरूलाई नै सघाउन तपाईंमा भर पर्दैन्।
तिनीहरू धर्तीको प्वालभित्र जान्छन् अनि कहिल्यै बोल्न सक्तैनन्।
19 जो मानिसहरू म जस्तै जीउँदा छन्,
के आज ती मानिसहरूले तपाईंको गुण गाउनेछन्?
पिताले तिनका छोरा छोरीहरूलाई भन्न सक्नु पर्दछ कि तपाईं विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।
20 यसैले म भन्दछु, “परमप्रभुले मलाई बचाउनु भएको छ।
यसैले हामी परमेश्वरको मन्दिरमा आफ्नो जीवनभरि गीत गाउनेछौ,
अनि संङ्गीत बनाउने छौं।”
21 तब यशैयाले हिजकियाहलाई भने, “तिमीले नेभारा पिँधेर धूलो पार अनि त्यो आफ्नो घाउमा लगाऊ, तब तिमी निको हुनेछौ।”
22 तर हिजकियाहले यशैयालाई सोधे, “त्यस्तो के संकेत छ परमप्रभुबाट ता कि म निको हुनेछु? त्यस्तो के संकेत छ जसले म परमप्रभुको मन्दिर जाने समर्थताको प्रमाण गर्दछ?”
38:8 अहाजको पाइलाहरूमाथि विषेश एउटा भवनको सिंडीहरू जुन अहाजले घडी़ झैं प्रयोग गर्थ्यो।
38:11 याह हिब्रूमा “परमेश्वरको नाउँ” वा “यहोवे”। हेर्नुहोस् शब्द सूची “यहोवे”।